Knowkedge – Page3– Myanmar Daily News
အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ် ပထမဆုံးပျံမယ့်ယာဉ်ရဲ့ ပဲ့ကိုင် မြန်မာ အမျိုးသမီး အာကာသ သိပ္ပံပညာရှင်
ငယျငယျက ကောငျးကငျကွီးကို မော့ကွည့ျပွီး ကိုယျနတေဲ့ ကမ်ဘာကွီးမှာပဲ သကျရှိတှေ နတောလား၊ ဟိုးအဝေးကွီးမှာ မွငျနရေတဲ့ တခွား ဂွိုဟျတှမှောရော သကျရှိတှေ မြား ရှိနိုငျမလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျးရငျထဲမှာ အမွဲရှိခဲ့သူ၊ အဲဒီ စူးစမျးခငြျတဲ့ အတှေးစိတျကူးကို ကွိုးစားမှုတှေ၊ တီထှငျ ဖနျတီးမှုတှနေဲ့ အကောငျအထညျ ဖောျနိုငျသူကတော့ မွနျမာ အမြိုးသမီး အာကာသ သိပ်ပံပညာရှငျ ဒေါျမီမီအောငျ …
လိမ္မော်သီးရောင်းပြီး ရွာမှာ စာသင်ကျောင်းတွေဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယအမျိုးသား
လိမ်မောျသီးရောငျးပွီး ရှာမှာ စာသငျကြောငျးတှဆေောကျပေးခဲ့တဲ့ အိန်ဒိယအမြိုးသား ဆငျးရဲရငျလကျအောကျခံနိုငျငံဘဝရောကျတတျပါတယျပညာရေးဟာနိုငျငံရဲ့ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုပါပဲ။စာသငျကြောငျးလှူတယျဆိုတာ နိုငျငံရဲ့အနာဂါတျအတှကျပါပဲ။ အိန်ဒိယနိုငျငံ ကာနာတာကာ ပွညျနယျမှာနထေိုငျတဲ့ အသကျ(၆၈)နှဈအရှယျ Harekala Hajabba ဟာ လိမ်မောျသီးရောငျးပွီး ဘဝကိုရပျတညျနတေဲ့သူတဈဦးဖွဈပါတယျ။သူဟာ အညတရမိသားစုတဈစုကနမှေေးဖှားလာခဲ့တာဖွဈပွီး မိသားစုအခကျအခဲတှကွေောင့ျ သူ့ရဲ့တရားဝငျပညာ ရေးကိုပွီးဆုံးအောငျ မသငျခဲ့ရတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယ့ျ ဘဝမှာ ပညာဟာအဓိကအရပေါတဲ့နရောမှာ ရှိနတောကို သိတဲ့သူဟာ သူ့ရှာမှာရှိတဲ့ ကလေးတှပေညာဆကျလကျ သငျယူနိုငျဖို့ သူလုပျဆောငျပေးမယျ ဆိုပွီး …
ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ်က အထမ်းသမားတွေအတွက် အခြေခံစားသောက်ကုန် တွေသွားရောက်လှူဒါန်းပေးမယ့် ထူးအယ်လင်း
အဆိုတောျကွီးထူးအယျလငျးကတော့ လာမယ့ျ နိုဝငျ ဘာလ ၂၁ ရကျနေ့မှာကြိုကျထီးရိုးတောငျပေါျက အထမျး သမားမိသားစု တှအေတှကျ အခွခေံစားသောကျကုနျတှကေို သှားရောကျလှူဒါနျးပေးမှာဖွဈတယျလို့အသိပေးထားပါတယျ။ ဒီကြိုကျထီးရိုးတောငျပေါျမှာ အထမျးသမားအဖွဈလုပျကိုငျနကွေတဲ့ သူတှရေဲ့ အိမျထောငျစုဟာ ၉၀၀ ကြောျရှိတယျ လို့သိရ ပါတယျ။ အဲဒီ အိမျထောငျစု ၉၀၀ အတှကျလိုအပျတဲ့စားသောကျ ကုနျလေးတှလှေူဒါနျးဖို့အတှကျ အဆိုတောျထူးအယျလငျးက ၅သိနျးကပြျ စတငျကာ မတညျလှူဒါနျးသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ကြိုကျထီးရိုးတောငျပေါျမှာ အထမျးသမားမိသားစု …
အံ့ဖွယ် သီလတန်ခိုးကြောင့် သက်တော် ၁၀၂ နှစ်ပေမယ့် ကျန်းမာစွာ သွာလာနိုင် တရားဟောနိုင်တဲ့ ဆရာတော်ကြီး
အံ့ဖှယျ သီလတနျခိုးကွောင့ျ သကျတောျ ၁၀၂ နှဈပမေယ့ျ ကနြျးမာစှာ သှာလာနိုငျတရားဟောနိုငျတဲ့ ဆရာတောျကွီး ပုသိမျ- မုံရှာ လမျးဘေးကကြောကျဖူးစံပွကြေးရှာကဘုနျးတောျကွီးကြောငျးမှာသီတငျးသုံးနထေိုငျတောျမူတဲ့သကျတောျ ၁၀၂နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ ဆရာတောျ ဦးပညာသာရ ဟာယနေ့အခြိနျတညျး အကူအညီ မပါပဲ လမျးလြှောကျနိုငျသလို ၊ တရားဟော ခွငျးသီလပေးခွငျးတို့ကိုလညျး ကောငျးမှနျစှာလုပျဆောငျနိုငျနသေေးတယျလို့ အံ့သွစှာသိရပါတယျ။ ဆရာတောျဘုရားကွီးဟာ ရခိုငျပွညျနယျ ရမျးဗွဲမွို့နယျ ဇာတိဖွဈပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျထိ အသကျတောျ ၁၀၂ရှိသည့ျတိုငျ …
ပိုင်ဆိုင်သမျှ ဆုကြေးများပါအပါ အကုန်လှူဒါန်းမယ့် ဖတ်သူတိုင်း မျက်ရည် မခိုင်နိုင်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ “သေတမ်းစာ”
ဘဝ ဟူသညျတိုတောငျးလှပစှေ.ကနျရပွေငျ၌ တကျသောရပှေကျမြှသာ ဖွဈတယျ။ကှေးသောလကျမြားဆန့ျမသှားမီမတညျသော အသကျခန်ဓာ ဟူသညျဇာတိ ဇရာ မရဏသောက ပရိဒဝေ အနိစ်စအမွဲမှနျကနျသောအရာမမွဲခွငျးသာဖွဈတယျဘုရား ရှငျသောျမှ မလှှဲနိုငျတဲ့တရားအနိစ်စသဆေုံးခွငျး၏ တရား။ တနေ့တခြိနျလမှောလှင့ျသော ပှင့ျခပြျငယျနှယျ ကြှနျမ သဆေုံးပါလိမ့ျမယျ။ကြှနျမ အ သကျ လူကွီးအရှယျသှားရမဲ့လမျး ပွငျဆငျခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျမကိုယျ ကြှနျမဖဖေေ့လို အာဇာနညျလို့မယူဆပါဘူး။ အမှနျတရားနဲ့ တရားဥပဒသောမွတျနိူးပါတဲ့ သာမနျလူမွနျမာအမြိုးကောငျးစားရေးကိုရှေးရှူသူသာဖွဈတယျအကယျ၍ ကြှနျမ သလှေနျတဲ့အခါမငိုပါနဲ့ မပူဆှေးကွပါနဲ့ကွီးကွီးကယြျကယြျ …
မြန်မာ့ ပထမဆုံး လေယာဥ်ပြန်ပေးဆွဲသူ ဦးစောကျော်အေး
၈ နာရီထိုးနပွေီဗြ လယျေစပီကာက ကောငျမ လေးက ခေါျနပွေီ။ စဈတှေ စဈတှေ လယေဉျပြံထှကျပါတော့မယျ စဈတှကေို လိူကျပါမယ့ျ ခရီးသညျမြား ကွှကွပါရှင့ျ လယေဉျပြံ က အဆငျသင့ျစောင့ျနပေါပွီ။ ဘိုကြောျ ဘိုကြောျကွှပါတဲ့။ အံမယျ ၃ခါလောကျခေါျမှ ကွှလာတယျ။ကတြောျကွည့ျ လိုကျတယျ။ ကနြော့ ရှေ့ခုံမှာ လာကတြယျ။ လကျပဈဗုံးက ကနြောျ တဈယောကျတညျးပါတယျ။ သနေတျ က …
ကျောင်းဆရာမ အလုပ်ကထွက်ပြီး ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘွားတွေကို ဂေဟာထောင်ပြီး ပြုစုပေးတဲ့ မိန်းမချောလေး
ကြောငျးဆရာမ အလုပျကထှကျပွီး ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘှားတှကေို ဂဟောထောငျပွီး ပွုစုပေးတဲ့ မိနျးမခြောလေး မရှိဆငျးရဲသားတှနေဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့နတေဲ့ အဘိုးဘှားတှကေို စောင့ျရှောကျတယျ ဆိုတာဟာ တကယျမှနျမွတျတဲ့အလုပျ ပါနောျ။ မိနျးမခြောလေး တဈယောကျကလညျး စှနျပဈခံ ဘိုးဘှားတကေို စောင့ျရှောကျနတော ဖွဈပါတယျ။ ထိုမိနျးကလေးကတော့ဧရာဝတီတိုငျး ဒသေကွီးဟငျ်သာမွို့အငျ်ဂပိုလမျးမကွီးဘေးသီလှကုနျးမှာနတောဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ ဘဝကတော့ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးလေးဖွဈပါတယျ။သူမဟာ ကြောငျးပွီးတော့ ကြောငျးဆရာမအလုပျဝငျလုပျကိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ထို့နောကျသူမရဲ့ ခံယူခကြျအရ အလုပျကထှကျပွီးတော့ …
မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးရှိ STAY HOME သတ်မှတ် ထားသည့် မြို့နယ်များ ( အများသိအောင် ရှယ်ထားပေးပါအုံး )
မွနျမာ တနိုငျငံလုံးရှိ STAY HOME သတျမှတျ ထားသညျ့ မွို့နယျမြား (အမြားသိအောငျ ရှယျထားပေးပါအုံး …) Stay at Home မပါဝငျသညျ့မွို့နယျမြားတှငျ ဘုရားစတေီမြား၊ လဘကျရညျဆိုငျ၊ စားသောကျဆိုငျ မြား ပွနျဖှငျ့ပွု တော့မညျ ဖွဈရာ Stay at Home သတျမှတျထားသညျ့ မွို့မြားကို သိရှိနိုငျ စရေနျ ပွနျလညျတငျပေး လိုကျပါသညျ။ …
ရန်ကုန်မှာတော့ စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီရန်ကုန်က လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော်ခန့်က.
ရန်ကုန်မှာတော့ စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီရန်ကုန်က လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော်ခန့်က ရန်ကုန်မှာတော့ စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီရန်ကုန်က လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော်ခန့်က. ရန်ကုန်မှာတော့ စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီရန်ကုန်က လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော်ခန့်က. ရန်ကုန်မှာတော့ စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီရန်ကုန်က လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော်ခန့်က. ရန်ကုန်မှာတော့ စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီရန်ကုန်က လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော်ခန့်က. ရန်ကုန်မှာတော့ စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီရန်ကုန်က လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော်ခန့်က. ရန်ကုန်မှာတော့ စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီရန်ကုန်က လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော်ခန့်က. ရန်ကုန်မှာတော့ စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီရန်ကုန်က …
ဖေ့ဘုတ်မှာ အခုတလော “အလကား ဦးဇော်ဇော်”ဆိုပြီး ပြန့်နေတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ကိုယျဖာသာအနံပြောကျတာကိုခေါျပီး စဈဆေးပေးတယျ အလကား တဲ့ Positive ရှိတယျလညျးသိရော ထမငျးကြှေးပီး p center. ပိုပေးတယျ အလကား တဲ့ Center ရောကျတော့ ကုတငျတဈလုံးစီပေါျမှာ စောငျအသဈ ခေါငျးအုံးအသဈ ခွငျထောငျအသဈ အိပျယာခငျးအသဈ ခေါငျးအုံးစှပျကလညျးအသဈ Aircon ကလညျး အသဈတပျထားသေးတယျ အလကား တဲ့ အိမျသာ ရခြေိုးခနျး သပျသပျရပျရပျကလညျး အဆငျသငျ့ လိုအပျတဲ့ …
Previous 1234… 73 Next
Copyright © 2020 Myanmar Daily News.